🥇 Accountig maka ndị ọrụ ugbo
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 747
Accountig maka ndị ọrụ ugbo
You chọrọ ịbụ onye ọrụ anyị na obodo gị ma ọ bụ obodo gị?
Video nke akaụntụ maka ndị ọrụ ugbo
Nye iwu maka ndị ọrụ ugbo
A gha agha ego nke ndi oru ugbo n’enwe ya. Iji nweta nsonaazụ dị ịrịba ama na usoro dị otú a, ịkwesịrị ịwụnye ngwanrọ dabara adaba maka ebumnuche ewepụtara. Jiri ọrụ nke ndị ọkachamara ọkachamara nke mmemme site na ụlọ ọrụ mmepe Software USU. Sọftụwia anyị na - eduzi gị site na ịdebanye ego nke ndị ọrụ ehi kwesịrị ekwesị. Usoro ihe omume ahụ agaghị emehie ihe n'oge ọrụ ụlọ ọrụ n'ihi eziokwu ahụ na ọ na-emekọrịta ihe ọmụma site na iji ụzọ akpaaka.
Usoro kọmputa nke iji mmekọrịta ozi eme ihe bụ njirimara nke ngwa niile ndị otu anyị wepụtara maka ndị ọrụ anyị. Nwere ike ịrụ njikwa akaụntụ na ugbo na-enweghị ntụpọ ma ọ bụrụ na ị wụnye ngwa anyị na kọmputa nke ụlọ ọrụ gị. Ngwa a na - ejide ndekọ ahịa maka ịrụ ọrụ na njikarịcha. N'ihi ọrụ ya, ị ga-enwe ike inweta nnukwu uru na ụdị asọmpi nke ahịa ndị ọrụ ugbo. Onweghi ndi ya na ha ga-enwe ike imegide ihe obula na ulo oru na aru oru ngwa ahia.
Ngwaahịa anyị zuru oke na-enyere gị aka belata olu nke uru efu. Ma, dị ka ị maara, uru furu efu furu efu ego. Yabụ, site n'ịrụ ọrụ dị mgbagwoju anya anyị na-aza maka ndị ọrụ ugbo, ị nwere ike bulite ọkwa nke uru site na ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ. Ihe ikpe azu anyi g’eme ka anyi nweta bu ezigbo onye ndu ahia karia nke kachasi nma. Emere mmemme a maka ọnụahịa dị ala dị ala ma, n'otu oge ahụ, nwere ọdịnaya arụmọrụ mara mma.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ njikwa ego na ugbo, ị nweghị ike ime n'enweghị usoro mgbanwe anyị, ngwa a na-enye gị ohere idozi nsogbu dị iche iche ngwa ngwa ma meghachi omume ngwa ngwa n'ọnọdụ ndị dị egwu. ’Ll ga-enwe ike izere mmepe dị oke egwu nke azụmahịa nke onye ọrụ ugbo gị site na iji ngwa ọkachamara a. Ndị ọrụ ugbo ga-enwe ọ happyụ ma ọ bụrụ na ejiri usoro mmemme anyị mee nyocha, n'ihi etu esi arụ ọrụ ya.
Ndị ọrụ ugbo kwesịrị ịrụ ọrụ n'enweghị ntụpọ ma ọ bụrụ na akwụ ụgwọ nlebara anya nke ọma na njikwa nke ndekọ ego nke ndị ọrụ ugbo. Sọftụwia anyị dị elu ga - enyere gị aka ileta nleta dị mkpa. Igosipụta oge na-egosi na desktọọpụ nke onye ọrụ na-ahụ maka ọrụ. Ọzọkwa, a na-emezi usoro ngosi ahụ nke ọma ma ghara igbochi ọrụ ndị ọrụ ugbo. Ọbụghị naanị na emere ka ọkwa ahụ gosipụta, mana ọ na-agakọkwa nke ọma site n'ụdị iji ghara ibubiga oghere ọrụ.
Na njikwa njikwa, ị ga - eduga, na - agabiga ndị asọmpi niile n'ahịa. A ga-enye ndị ọrụ ugbo nnwere onwe ime ihe, nke pụtara na ha ga-enwe ike ihu ndị iro kachasị ike na nha anya. Ga-enwe ike ịrụ ọrụ nchịkwa n'ime ugbo ahụ na ogo ogo dị mma ma ọ bụrụ na ị wụnye ngwọta anyị zuru oke na kọmputa nkeonwe.
Ngwaahịa a dị mgbagwoju anya maka mmekọrịta na ihe ọmụma na-eduga n'ahịa n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ nwere njikarịcha kachasị elu. ’Ll ga-enwe ike iduru ụlọ ọrụ gị gaa n'ọkwá dị elu ma nye ndị ọrụ ugbo ọnọdụ ọrụ kacha mma. Lezie njikwa ọrụ njikwa na ogo ogo ogo, na-eleghara nkọwa ndị kacha mkpa anya. Usoro mmemme anyị na-enyere gị aka ịghọ onye isi site na idobe ya na ogologo oge yana site na kọlụm gị ziri ezi Forbes. A sị ka e kwuwe, ụlọ ọrụ ahụ ga-enwe ike ịbawanye ọkwa nke mmefu ego, nke pụtara, melite steeti maka ego ụlọ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ n'ọfịs na ozuzu ehi, wụnye ngwanrọ pụrụ iche site na otu, USU Software. Ngwaahịa anyị na-aza ajụjụ na-enye gị ikike iji nyochaa azụmahịa gị n'ọtụtụ ụwa ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Maka nke a, enyere mmekọrịta na maapụ ụwa, ebe akara akara ebe kwekọrọ na ya.
Ihe mgbagwoju nke oge a maka nyocha nke ndi oru ugbo site na USU Software na-eme ka o kwe omume imeri oru mmeputa. A ga-eme nyocha nyocha nke ehi na-enweghị ntụpọ ma ọ bụrụ na ngwaahịa anyị zuru oke na-arụ ọrụ. Sọftụwia a na - eme ka ọ kwe omume ịka akara ebe ọ bụla na eserese ngosi, nke na - enye ngosipụta doro anya nke ozi. Ọ bụrụ na ịnye njikwa njikwa ya, ọ kwesịrị, wụnye ngwaahịa ọgbara ọhụrụ maka ndị ọrụ ugbo. N'ihi usoro zuru ezu sitere na USU Software, ugbo gị kwesịrị ịdu ahịa ma ghara inye ndị asọmpi otu ohere imegide gị. Jiri nyocha ọchụchọ nke ọma nke na-enye gị ohere ịchọta ozi ọbụlagodi mgbe naanị otu ozi dị.
Ngwa sitere na oru USU Software na-eduga n'ahịa a n'ihi n'eziokwu na o nwere njikarịcha kachasị elu na, n'otu oge ahụ, ọ dị ọnụ ala. Ọrụ ugbo na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na USU Software na-enye gị ohere ịmepụta ọrụ mmepụta dịgasị iche iche na eserese eserese na ihe ngosi ndị ọzọ. Ngwakọta azịza nke oge a maka ịkọpụta ndị ọrụ ugbo na-enyere gị aka ijikwa ọtụtụ ọrụ ngwa ngwa ma ghara ịlafu ego ọ bụla nke ntọala ndị ọrụ ugbo.
Ugbo gị ga-arụ ọrụ n'enweghị ntụpọ na data dị mkpa ga-echekwa na ebe nchekwa nke kọmputa gị. Ọ bụrụgodi na ị nwere naanị njikọ Internetntanetị adịghị ike, enwere ike ịchekwa ozi ahụ na kọmpụta nkeonwe ma jiri ya maka nzube ya.
USU Software zuru ezu ọrụ ubi na-aza ajụjụ ngwaahịa na-enye gị ike ịghọ onye ọchụnta ego na-aga nke ọma nke na-erigbu ego ego impeccpe. Nyocha a na-arụ n’ebe ndị na-azụ ehi nọ na-arụ ọrụ nke ọma mgbe nile, azụmahịa gị agaghịkwa enweta uru. Mee nyocha njikwa maka ndị ọrụ ugbo ma n'otu oge ahụ mee nyocha nke ọrụ mgbasa ozi. Sọftụwia anyị maka anụ ụlọ na-enyere gị aka ijikwa ngwa ngwa ịkwalite njirimara ụlọ ọrụ.
Akara ahụ n'onwe ya enwere ike iji mepụta ụdị ụlọ ọrụ dị n'otu n'ụdị ụdị akwụkwọ ọ bụla. Idebe logo n'ụdị ndabere na akwụkwọ a na-ekepụta ga-enye gị ohere ịme mmemme mgbasa ozi. Awarenessmara mmata na-abawanye nke ukwuu, yana ya, ntụkwasị obi ndị ahịa gị na ụlọ ọrụ ahụ ga-abawanye. Sọftụwia nke oge a maka njikwa njikwa nke ndị ọrụ ehi na-eme ka o kwe omume ịrụ ọrụ na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke iwu, na-ekesa ha dịka ọnọdụ ha si dị. Na ụlọ ọrụ gị, ihe na-arị elu ma ọ bụrụ na mgbagwoju site na ụlọ ọrụ anyị na-enyere gị aka na mmejuputa ọrụ dị mkpa nke ngwa ngwa. I nwekwara ike iji maapụ ụwa gosi akara mpaghara nke gị na ebe ndị na-emegide ha.
Na-erite uru nke ngwanrọ njikwa njikwa maka ndị ọrụ ehi na mgbe ahụ ị gaghị enwe ike ileghara iwu kachasị mkpa anya. Otu akara ngosi ga-agba ọkụ na maapụ ahụ, nke na-egosi ịbịaghị n'oge. Ọ ga-ekwe omume ịme ihe n'oge ma jeere onye ahịa ahụ tinyegoro akwụkwọ ozugbo enwere ike. Companylọ ọrụ gị nwere ike ibute ahịa ahụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na ụlọ ọrụ anyị na-enye gị nyocha dị mkpa na nke kachasị mma.
Otu USU Software jiri teknụzụ kachasị elu iji hụ na akụkọ ndị a na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ n'enweghị ntụpọ. Ngwaahịa zuru oke maka ịdebanye aha ndị ọrụ ugbo bụ ngwaahịa na-enye gị ohere ịzaghachi nke ọma na ọnọdụ nke ọnọdụ dị egwu. A na-eme ọrụ nlekọta n'ugbo ahụ n'emeghị ntụpọ, nke pụtara na ị ga-enwe ike ịsọmpi na ndị nha anya kachasị nke ọma. Ngwaahịa dị mgbagwoju anya, nke emepụtara maka njikwa njikwa nke ndị ọrụ ehi, na-enyere gị aka iji atụmatụ nke ibipụta kaadị profaịlụ pụrụ iche.
Ga-enwe ike iji na ngwa nbipute iji nweta akwụkwọ si akwụkwọ na ndekọ oge.
Mee ka ụlọ ọrụ gị na ọrụ ndị ọkachamara na-arụ ọrụ site na enyemaka nke mmepe anyị, mgbe ahụ, ọkwa nke ego ga-adị elu dị ka o kwere mee. Ejiri sọftụwia a na - eji menu nke ọma. Ọ nwere kensinammuo dashboard na-enye gị ohere inyocha zuru ezu akuko. Anyị ehi onye ọrụ ugbo management njikwa software bụ ihe kasị oké ọnụ ngwọta na ahịa. Ọrụ ugbo na-enweghị ntụpọ ebe ọ bụ na ndị ọrụ niile na-enwe ike ịmekọrịta ihe ngosi nke ozi egosipụtara ugbu a site na ngwa mmepe arụmọrụ na-agbanwe.
Ọrụ ụmụ anụmanụ
Nyocha na nyocha nke mmepụta anụ ụlọ
aza ajụjụ maka nnụnụ
Nyocha maka ụgwọ na mkpụrụ nke ngwaahịa anụ ụlọ
Nyocha maka ihe ọkụkụ na mmepụta anụ ụlọ
Nyocha maka ngwaahịa anụ ụlọ
aza ajụjụ maka idebe ụmụ anụmanụ
Nyocha maka ụgwọ mmepụta nke ngwaahịa mmiri ara ehi
Na-aza ajụjụ maka mkpụrụ anụ ụlọ
aza ajụjụ na mmiri ara ehi ugbo
aza ajụjụ na ozuzu ezì
Accountza ajụjụ na ozuzu atụrụ
ndekọ ego nke mmiri ara ehi na-amịpụta
aza ajụjụ maka ụmụ anụmanụ maka fattening
Akaụntụ ụmụ anụmanụ maka ito na fattening
aza ajụjụ maka ịzụ ụmụ anụmanụ
aza ajụjụ nke a kenyere
ọnụahịa nke akwụ ụgwọ na anụmanụ
ịkọ ọnụ ahịa na mmepụta nke anụ ụlọ
aza ajụjụ nke ewu
aza ajụjụ maka ìgwè ehi
aza ajụjụ banyere inyinya
ọnụahịa nke ngwaahịa ọkụkọ
nyocha nke mmepụta nke ngwaahịa anụ ụlọ
nyocha nke ngwaahịa nke mmiri ara ehi
nyocha nke ngwaahịa nke livestocks
aza ajụjụ maka ugbo ulo ozuzu okuko
emeputa ego na oru ugbo
usoro maka usoro ulo ozuzu okuko
Nyocha nke ọnụahịa nke anụ ụlọ
Nyocha nke mmepụta na ọnụahịa nke ngwaahịa anụ ụlọ
Nyocha nke ego nke mmiri ara ehi
Nchoputa onu ahia banyere ebe anumanu anumanu
nyocha nyocha nke oru ugbo
Nyocha nyocha nke mmepụta anụ ụlọ
Nyocha anụmanụ na ugbo
ngwa maka ugbo
akpaaka nke anụmanụ
mmemme mmepe ugbo
logbook maka ndepụta ego
a nwoke oru ugbo ugbo aza ego
a ngwaahịa akara nke anụ ụlọ
a ndekọ ndekọ nke aza ajụjụ nke oriri faili ntanetịime
a ndekọ nke faili ntanetịime aza ajụjụ
akwụkwọ ndekọ nke njikwa nri
Mmemme ịzụlite ehi
Ndebanye aha ụmụ nnụnụ
Nnụnụ azụọ ajụjụ
Ngụkọta oge nke ndị na-eri nke mmiri ara ehi
Ndebanye aha ehi
Center nke ọmụma usoro ke anụmanụ husbandry
Njikwa maka nnụnụ
Njikwa maka onye ọrụ ugbo
Njikwa maka idebe ụmụ anụmanụ
Nchịkwa na anụ ụlọ
Njikwa nke anụmanụ
Njikwa ụlọ ọkụkọ
Njikwa anụ ọkụkọ
Akwụ ụgwọ maka ngwaahịa anụ ụlọ
Ọnụ ego maka ịzụ mmiri ara ehi
Ọnụ ego na-akọ maka ọkụkọ ọkụkọ
Ọnụ ego nke ngwaahịa anụ ụlọ
Mmemme oru ugbo
Nlekọta ugbo mmiri ara ehi
Download ngwa maka ugbo
Budata maka mmemme n'efu maka ugbo
Download usoro ihe ubi
Download usoro ihe omume nke rabbits aza ajụjụ
Akwụkwọ electronic nke ịkọ ụmụ anụmanụ na nnụnụ
Ugbo oru ngwanrọ
Nchịkọta nri oriri
Ndepụta oriri log
Njikwa mma njikwa
Ndebanye aha ndepụta
Na-ejuputa nkwupụta nke njikwa nri
Ndebanye aha Ewu
Njikwa ìgwè ehi
Ahịhịa njikwa software
Sistemụ njikwa usoro
Usoro ihe omuma banyere oru ugbo
Akaụntụ anụ ụlọ
Mmemme mmepe anụ ụlọ
Ngwaọrụ ugbo ngwa ngwa
Ijikwa anụ ụlọ
Isi ìgwè ehi
Nchịkwa nke anụ ụlọ
Nchịkwa nke ugbo
Njikwa nke ugbo ugbo
Nchịkwa nke ehi
Nchịkwa nke ụlọ ọkụkọ
Nhazi na akpaaka nke anụ ụlọ
Ndepụta mmiri ara ehi
Nkọwapụta mmiri ara ehi
Usoro nnabata usoro ntanetị nke nnụnụ buru ibu
Ndebanye aha edepụtara nke anụ ụlọ
Ezi na-aza ajụjụ
Okuko mma akara
Primary ajụjụ nke anụ ụlọ na ngwaahịa
Nchịkwa mmepụta nke mmiri ara ehi
Mmepụta nke ngwaahịa nke livestocks
Mmemme maka ịzụ ụmụ anụmanụ
Mmemme maka onye ọrụ ugbo malitere
Mmemme maka onye oru ugbo
Mmemme maka ndị na-azụ ihe
Mmemme maka ehi
Mmemme maka faili ntanetịime
Mmemme maka ìgwè ehi
Mmemme maka ndị na-azụ anụ ụlọ
Mmemme maka ịkwụ ụgwọ ezì
Mmemme maka ulo ozuzu okuko
Mmemme maka ozuzu aturu
Nlekọta mma nke anụ ọkụkọ
Ndebanye aha rabits
Njikwa oke oyibo
Ndebanye aha maka ozuzu okuko
Ndebanye aha nke ehi
Ndebanye aha nke inyinya
Ndebanye aha nke ezì
Na-agba ọsọ ugbo ugbo nke onwe
Atụrụ na-aza ajụjụ
Obere ruminant mmemme
Mpempe akwụkwọ maka ugbo
Mpempe akwụkwọ na anụ ụlọ
Usoro maka ịkọ anụ
Usoro maka ichebe ụmụ anụmanụ
Sistemụ maka onye ọrụ ugbo
Usoro maka ugbo ugbo
Usoro maka ehi
Sistemụ maka okuko
Sistemụ ọkụkọ ugbo
Sistemụ maka atụrụ atụrụ
Sistem na anụ ụlọ
Ọnụ mmiri Waterfowl
Usoro ọrụ maka ịzụ ụmụ anụmanụ
Zootechnizi na oru ugbo